Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xuruufta iyo vinyl-yada | Abuurista khadka tooska ah
Way badan yihiin qaababka naqshadeynta adduunka naqshadeynta muuqaalka. Waqtigaan la joogo, isku darka macluumaadka iyo shabakadaha bulshada ayaa ah isbedelo aan joojinaynin tilmaamidda kororka qaab-dhismeedka is-beddelkooda.
Farshaxanka iyo shaqsiyaddu waxay ku kulmaan macnaha guud waxayna go'aansadaan inay si wadajir ah gacmaha u wada socdaan Si kale haddii loo dhigo, dadku hadda waxay marin u heli karaan qaabab tiro badan ama dhaqdhaqaaqyo farshaxan, iyagoo dooranaya midka ugu badan ee iyaga ku garta ama siiya raaxada weyn. Xaqiiq in inkasta oo waxyaabo badani jiraan, ay u dhaqmeyso sidii loogu talagalay dhaqdhaqaaqyada farshaxanka.
1 Maxaa loo isticmaalaa vinyl-yada?
2 Noocyada vinyl-ka
Maxaa loo isticmaalaa vinyl-yada?
Qodobkaan, waxaan ka hadli doonaa isticmaalka vinyl-yada, Qaab naqshadeed oo aad caan u noqday sanadihii la soo dhaafay, taas oo ay ugu mahadcelinayaan kor ku xusan: the baahinta macluumaadka iyo shabakadaha bulshada waana inay tahay sawirro isdaba-joog ah oo iswaafajinaya oo matalaya ujeeddo, dabeecad ama sabab lafteeda lafteeda. Waa sawirro u hoggaansami kara meel kasta oo dusha sare ah.
Fikradda waa shakhsiyeeyo meelaha leh dhadhanka shaqsiyeed baaxadda ugu weyn ee suurtogalka ah, taas oo ah, qayb weyn, oo lagu daro wax ku iibintaada gudaheeda.
Khamriga ugu badan ee guryaha laga isticmaalo ayaa ah derbiga vinyl. Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan vinillos, tani maahan wax ka badan oo ka yar sawirada astaan ​​ama motif in dadku guud ahaan u isticmaalaan inay ku qurxiyaan darbiga ama meelaha ku habboon guryahooda. Caadi ahaan, fikraddu waxay noqon kartaa in la siiyo soo koobid nolol gaar ah meel ka mid ah guriga. Sidaa darteed, darbiga vinyl-ka ayaa u oggolaanaya adeegsadaha shakhsiyeeyo meelaha gurigaaga ka kooban qaab raaxo leh oo fudud, mahadsanid vinyl-yadaas.
El Daabacaadda Vinyl Waa mid kale oo ku jira liiska kala-soocidda waana sida magaceeda ka muuqata oo kale naqshadeynta aan ku horumarin karno adoo adeegsanaya softiweerka naqshadeynta, taas oo noo ogolaaneysa inaan faahfaahinno moodooyinka si fiican loo sharaxay ee la taaban karo marka loo eego cabirkooda iyo qaabdhismeedkooda.
Ugu dambeyntiina, adigoo leh midabka iyo cabbirka la doonayo, waan sii wadi karnaa inaan daabacno jees jees. Sidoo kale waa mid ka mid ah vinyl-yada ugu raaxada badan ee jira marka la eego diyaarintiisa, iyada oo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada in laga takhaluso khaladaadka sida joogtayn la'aanta marka la sameynayo sawirro qaabeed si loo abuuro tixraac farshaxanka.
Gawaarida, gawaarida vinylka polymeric. Nolosha in ka badan 5 sano, vinyl-ka polymeric-ka waxaa loo adeegsadaa qaab dhismeedka gawaarida gawaarida, oo ku habboon xaaladaha deegaanka ee ay u muuqdaan inay soo gaadhayaan. Sidaa darteed, vinyl-yadaas waxaa si gaar ah loogu talagalay gawaarida dharka. Sidaas darteed,
Vinyl daaqadaha dukaamada iyo calaamadaha. Waxaa loo adeegsadaa inta badan nooca xafiiska xafiiska, soo bandhigida qurxinta wanaagsan ee noqon kara mid aad u fiican sida ay caqliga u yihiin. Naqshadihiisa ayaa badankood dusha sare ee muraayadda, iyadoo loo adeegsaday wakaaladaha doonaya inay goobahooda ku qurxiyaan wax ka duwan asal ahaan.
El Vinylka qurxinta. Ha ku kadsoomin, moodooyinka kor lagu soo bandhigay si sax ah ayaa loo qurxiyaa gudaha xafiiska, sidoo kale gawaarida iyo dusha sare ee ka jira deegaanka xafiiska, laakiin sidoo kale waxaa jira vinyls loogu talagalay qurxinta walxaha aan ka heli karno aagga "Guriga" ee guryaheena, annagoo ka helayno vinyl loo heli karo xitaa alaabta guriga, albaabbada alwaax, darbiyada shubka, dabaqyada dhoobada
Waxay ku saabsan tahay isku dhafan oo xiiso leh kuwa doonaya inay talaabo dheer u qaadaan qurxinta dhismayaasha guryahooda. Vinyl-yada qurxinta ayaa matalaya talaabada tiknoolajiyadda iyo farshaxannimadu ay mar kale ku qaadanayaan qaab dhismeedka horumarka iyo naqshada guriga.
Isticmaaluhu wuxuu wajahay a noocyo badan oo naqshadaha vinylka ah, kuu ogolaanaya inaad naqshadeyso oo aad shakhsiyeeysid meelaha aad ku nooshahay waxaad horumarinaysaa qayb noloshaada ka mid ah. Markaa waa qalab aan fiicnayn marka ay timaado qurxinta, wax muhiim u ah dadka u shaqeeya naqshadeeyayaasha garaafka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xuruufta iyo vinyl-yada
Jorge Pierola Vicar dijo
Iyada oo dhammaan ixtiraamka la hayo, maqaalka waxaa ku jira fikrado qaldan, nooca loo kala baxaa waa wax aan macquul ahayn, waana wax aad u jahwareersan, oo deeqsi ah. Marka xigta la tasho xirfadle ama soo saare maxaa yeelay waxaad qortay iyo wax aan jirin wax badan ama ka yar isku mid ma aha. Laga soo bilaabo kalgacalka = __ +
Jawaab Jorge Piérola Vicario